उपरदाङगढीको ऐलानी जग्गा अतिक्रमण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
उपरदाङगढीको ऐलानी जग्गा अतिक्रमण
२०७१ फाल्गुन १७, आईतवार ०१:४६ गते
दाहखानी । चितवनको ऐतिहासिक किल्ला उपरदाङगढी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको सरोकारवालको भनाइ छ । उपरदाङगढी संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका अध्यक्ष ढलक राना जग्गावालाहरु उपरदाङगढीतर्फका ऐलानी जग्गा कब्जा गर्ने होडमा लागेको बताउँछन् ।
भर्खर पनि गढी अगाडिको क्षेत्रमा नयाँ तारबार भयो । स्थानीय गणेशबहादुर थापा मगर भन्छन् ‘पुरानो तारबार उखेलेर १० हात मिचेर नयाँ तारबार गरियो ।’ यसो गर्दा गढी क्षेत्रको झण्डै एक बिघा जमिन गुमेको छ ।
शक्तिखोरका लीला श्रेष्ठले आफ्नै सुरमा गढीतर्फ घुसेर तारबार गरेका हुन् भन्छन अध्यक्ष ढलक राना । श्रेष्ठले १५ वर्षअघि स्थानीय धनमाया गुरूङ्सेनीको जग्गा किनेका थिए । त्यो जग्गाभन्दा पछाडि पर्ने गढीको जग्गामा लीलाले दाबी गरेका हुन् ।
‘आफूले किनेको नम्बरी जग्गासँग जोडिएको ऐलानी जग्गा पनि आफँैतिर पार्ने चलन छ । लीलाले मात्रै होइन, अरुले पनि त्यही गरेका छन् । मैले लीलालाई किन यसो गरेको भनेर सोधेको हो । अरुले गर्ने मैले गर्न किन नपाउने भने’ अध्यक्ष रानाले भने ।
एकपछि अर्को गर्दै ऐलानी जग्गा हडप्ने होड चल्ने हो भने उपरदाङगढी किल्लामा सार्वजनिक जग्गा बाँकी नै नरहने अवस्था आउने उनले बताए । ऐतिहासिक क्षेत्रमा पर्यटन विकास हुने सम्भावना बढेर गएपछि बाहिरबाट जग्गा किन्नेहरुको होड चलेको छ ।
‘यस्तो बेलामा गढीको जग्गा संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । तारबार गरेर पनि जोगाउन सकिएन । पहिला लगाएको तारबारसमेत फुकालेर जग्गावालाले एकतर्फी तारबार गर्न थाले । जुन साह्रै दुःखद हो’ अध्यक्ष रानाले भने ।
उपरदाङगढी र नजिकैको शेरबास क्षेत्रमा विसं. २०१८ सालसम्म चितवनको सदरमुकाम थियो । यो पहाडी थुम्कोमा दुई सय वर्षभन्दा पुरानो किल्ला पनि छ । त्यसैले उपरदाङगढी क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व छ भन्छन् अध्यक्ष राना ।
पृथ्वीनारायण शाहका नाति, बहादुर शाहका छोरा शत्रुभञ्जन शाहको आदेश अनुसार विसं. १८०० सयको आसपासमा किल्ला बनाएको इतिहासकारहरुको भनाइ छ । समुन्द्र सतहबाट १२ सय ७५ मिटरको उचाइमा किल्ला निर्माण भएको छ ।
किल्लाले ६३९ वर्ग मिटर क्षेत्र ओगटेको छ । पूर्वीचितवनको रत्ननगर बजारबाट छ माइल उत्तरमा रहेको यो क्षेत्रबाट आकास खुलेका बेलामा चितवनको सबै समथर क्षेत्र राम्रो र प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले यहाँ पर्यटकहरु आउने गर्छन् ।
‘पर्यटक आउने क्रम सुरू भएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरु पनि आएका छन् । जग्गा किनबेच बढेको छ । स्थानीयका जग्गा व्यवसायीले खरिद गरेका छन् । गढी क्षेत्रमा चाँडै तारबार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो नभएमा ऐलानी भनेर सबै जग्गा कब्जा हुने खतरा छ’ समितिका अध्यक्ष रानाले भने ।
क्याप्सन ः उपरदाङगढी किल्ला ।
‘चितवन कोरोनाबाट अतिप्रभावित’
फर्केर हेर्दा २०७७ : चितवनले गुमायो राजनीतिका तीन धरोहर